Yurub oo ka arrinsaneyso badbaadinta wixii ka haray Xalab - BBC Somali
Yurub oo ka arrinsaneyso badbaadinta wixii ka haray Xalab
Image caption Burburka magaalda Xalab soo gaaray
Wasiirada arimaha dibada ee Midowga Yurub ayaa ku kulansan dalka Luxembourg. Waxayna wasiiradan ka xaajoonayaan sidii loo badbaadin lahaa wixii ka haray magaalada Xalab ee go'doonsan.
Waxaa sii kordhayay duqaymaha cirka ah ee lagu hayo goobaha ay mucaaradka Suuriya ka haystaan magaaladaasi tan iyo markii dowladda Ruushka ay codka diidamada ah ee Veto saartay qaraar sheegaya in xabad joojin la sameeyo.
Balse xoghayaha arimaha siyaasada ee Midowga Yurub Federica Mogherini, ayaa sheegaysa inay jirin cid soo jeedisay in Ruushka la saaro cunaqabatayn inkastoo uu taageero la garab taagan yahay dowlada Suuriya.
Xoghayaha arimaha dibedda ee Britain, Boris Johnson, ayaa isna shacabta Ruushka ka codsaday inay qaataan waxa uu ugu yeeray wadada nabada.